Magic Jigsaw Puzzles 5.12.1 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 5.12.1 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
ဂိမ္းမ်ား ပေဟဠိ Magic Jigsaw Puzzles
Magic Jigsaw Puzzles ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Welcome to the jigsaw planet! 50 million downloads worldwide! 🏆 Magic Jigsaw Puzzles isajigsaw puzzle game with over 25,000 fun HD pictures to relax and solve, new free daily jigsaws and photos curated from National Geographic and Sony Pictures! Find out why adults solve 50 million jigsaw puzzles every month!
And there are more game features to discover! Be the real jigsaw explorer! Simple interface will let you easily createaunique personalized impossible puzzle using your own photo or image! Lovely in-game musiс collection will go along perfectly with your stress-relieving and leisured play! In case you’re in for some challenge, free hard levels with up to 630 pieces will beaperfect way for any adult to train the brain - collect every daily puzzle online!
★ More than 25,000 beautiful, HD puzzles combined into more than 500 jigsaw collections!
★ Large collection of brain train jigsaws with cute animals and cartoons, portraits, paintings, nature landscapes for adults.
★ Curated puzzle sets from our partners National Geographic and Sony Pictures! It will be really hard to choose where to start!
Please note! Magic Jigsaw Puzzles game is free to play but there are optional in-app purchases available. Еmail us at support@androidpuzzlessupport.zendesk.com for any issues, questions or comments. We would love to hear from you!
jigsaw ဂြိုဟ်မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်! ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း 50 သန်း downloads,! 🏆ကို Magic Jigsaw ပဟေဠိဖြေလျော့ခြင်းနှင့်ဖြေရှင်းမှ 25,000 ကျော်ပျော်စရာ, HD ပုံများ, National Geographic နှင့် Sony Pictures ရုပ်ရှင်ထဲကနေတာဝန်ယူထားသောသစ်ကိုအခမဲ့နေ့စဉ် jigsaws နှင့်ဓာတ်ပုံများနှင့်အတူတစ် jigsaw ပဟေဠိဂိမ်းပါ! အရွယ်ရောက်သူတိုင်းလ 50 သန်း jigsaw ပဟေဠိဖြေရှင်းနိုင်အဘယ်ကြောင့်ထွက်ရှာပါ!
ထိုအရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့ပိုဂိမ်း features တွေရှိပါတယ်! အစစ်အမှန် jigsaw ရှာဖွေသူ Be! ရိုးရှင်းသော interface ကိုသင်အလွယ်တကူသင့်ကိုယ်ပိုင်ဓါတ်ပုံတစ်ပုံသို့မဟုတ် image ကိုသုံးပြီးတစ်မူထူးခြားသောကိုယ်ပိုင်မဖြစ်နိုင်ပဟေဠိဖန်တီးပါစေလိမ့်မည်! နေချင်စဖွယ် In-ဂိမ်းmusiсစုဆောင်းခြင်းသင့်ရဲ့စိတ်ဖိစီးမှု-သက်သာရာနှင့်အပန်းဖြေကစားအတူဿုံတလျှောက်သွားပါလိမ့်မည်! သငျသညျအခြို့သောစိန်ခေါ်မှုအတွက်နေအမှု၌, ထဖို့ 630 ကိုအပိုင်းပိုင်းနှင့်အတူအခမဲ့ခက်အဆင့်ဆင့်ဦးနှောက်ကိုလေ့ကျင့်ပေးဖို့ဆိုအရွယ်ရောက်ပြီးသူတစ်စုံလင်သောလမ်းဖြစ်လိမ့်မည် - အွန်လိုင်းတိုင်းနေ့စဉ်ပဟေဠိစုဆောင်း!
★အခမဲ့ updated နေ့စဉ် jigsaw ပဟေဠိပြခန်း။
500 ကျော် jigsaw collection များကိုသို့ပေါင်းစပ်★ကျော် 25,000 ဆင်းလှသောအစ်မ, HD ကိုပဟေဠိ!
★သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူဒါမှမဟုတ်မှော် Jigsaw အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ရုပ်ပုံနှင့်ရှယ်ယာနှင့်အတူဓာတ်ပုံပဟေဠိ Create!
အထိ 630 ကိုအပိုင်းပိုင်းနှင့်အတူ★5အခက်အခဲအဆင့်ဆင့်: တစ်အစပြုသူအဖြစ်စတင်နိုင်ခဲယဉ်းလေ့ကျင့်ခြင်းနှင့်ဂိမ်းမာစတာဖြစ်လာ!
★ကို Preview ကြောင့်သင်အပိုငျးပိုငျးကိုက်ညီကူညီဖို့ရန်ခက်ခဲမယ့်ကိစ္စများတွင်အချောပဟေဠိ။
သာ. ကြီးသောဦးနှောက်စိန်ခေါ်မှုများအတွက်★လှည့် mode ကို! အုပ်စုများအတွက်အပိုငျးပိုငျးရွှေ့!
★အကြီးစားချစ်စရာတိရိစ္ဆာန်နှင့်ကာတွန်းနှင့်အတူဦးနှောက်ရထား jigsaws ၏စုဆောင်းခြင်း, ပုံတူ, ပန်းချီ, လူကြီးများအတွက်သဘာဝရှုခင်းများ။
★ရွေထားတဲ့ပဟေဠိကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဖက် National Geographic နှင့် Sony Pictures ရုပ်ရှင်ထဲကနေသတ်မှတ်! ဒါဟာဘယ်နေရာမှာစတင်နိုင်ရန်ရွေးချယ်ဖို့ကယ့်ကိုခက်ခဲလိမ့်မည်!
★သင်တစ်ဦး jigsaw ရှာဖွေသူဖြစ်လာကလေးတစ်ဦးသို့မဟုတ်တစ်ဦးအရွယ်ရောက်ပြီးသူများမှာနှငျ့သငျအခမဲ့ခက်ခဲ rebuses နှင့်ချစ်စရာလွယ်ကူသော jigsaws အများကြီးတွေ့ပါလိမ့်မယ်လျှင်အဘယ်သူမျှမကိစ္စ!
သင်သည်သင်၏မှော်ကိုယ်ရေးဖိုင်ဖန်တီးအပေါင်းတို့နှင့်ပဟေဠိသင်တစ်နေရာတည်းတွင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်အဖြစ်ကိုအလွယ်တကူသင်သည်မတော်တဆဂိမ်းထဲကနေဖျက်ပစ်ခဲ့ကြပေမည်အထုပ် restore ရှိသည်ဟု pack မှာရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူသို့မဟုတ် Facebook https://www.facebook.com/Magic.Puzzles.Community/ အပေါ်ကို Magic Jigsaw ပဟေဠိအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အကောင်းဆုံးပဟေဠိ Share
ကျေးဇူးပြုပြီးမှတ်သားထားပါ! မှော် Jigsaw ပဟေဠိဂိမ်းကစားရန်အခမဲ့ပေမယ့်မရရှိနိုင် optional ကို In-app ကိုဝယ်ယူမှုရှိပါသည်။ မည်သည့်ကိစ္စများ, မေးခွန်းများကိုသို့မဟုတ်မှတ်ချက်များများအတွက် support@androidpuzzlessupport.zendesk.com မှာကျွန်တော်တို့ကိုЕmail။ ငါတို့သည်သင်တို့ထံမှနားထောငျခစျြလိမျ့မညျ!
Magic Jigsaw Puzzles အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Magic Jigsaw Puzzles အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Magic Jigsaw Puzzles အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Magic Jigsaw Puzzles အား အခ်က္ျပပါ
ziopeppe စတိုး 9.83k 2.24M
Magic Jigsaw Puzzles ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Magic Jigsaw Puzzles အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 5.12.1
ထုတ်လုပ်သူ Banda Games
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://zimad.com/policy/
App Name: Magic Jigsaw Puzzles
File Size: 105.22MB
Release date: 2019-06-04 19:50:35
လက်မှတ် SHA1: A1:60:F0:A4:BC:7D:82:18:86:D1:E9:B3:AE:40:C1:86:C8:56:0D:B1
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Alex Rechevsky
အဖွဲ့အစည်း (O): Bandagames
Magic Jigsaw Puzzles APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ